I-Cuticles, ekhula ngesivinini somsindo, ama-hangnails, izipikili ezibuthakathaka ... Futhi lokhu kuhambela njalo kumphathi! Ngobusuku obuhle kakhulu, lapho ngifanele ngibuke kakhulu eminwebeni yami, ukubekezela kwami ​​kwaphuka. Ngakusasa ngangena emanzini omuthi angasebenziswa ngokusetshenziswa kwemithi yezipikili. Ukunakekela izipikili ezinesibindi neMawala - ngaphezu kwakho konke!
Sizokwenza ngaphandle kwezisulu
I-manicure engavamile ijwayele ukubizwa ngokuthi iYurophu. Ingcwele Yezingcwele ekubulaweni kwayo - ayikho amafayela we-nails esensimbi, ama-tweezers nezikhali. Akukho lutho oluqedwayo futhi alugciniwe: ama-softening agents okhethekile we-cuticles, amafayili e-wood nawolintshi. Ngakho-ke akudingekile ukukhononda mayelana nokusikeka ngenxa yokwehliswa kwemisipha yegazi futhi ukwesaba izifo ezithathwe ekamelweni lokugcoba. Futhi okubaluleke kakhulu - indlela engavumelekile yokushiya nokunakekela izipikili ezinesibindi ezivela eMawala ayilimazi isakhiwo sezipikili ezinempilo, futhi encane futhi ebeka eceleni - kusiza ukuba iqine futhi ngisho.
Okokugcina, umphumela we-manicure waseYurophu uncike ezindleleni ezisetshenziselwa wona. Ochwepheshe beSwitzerland Research and Clinical Laboratory Mawala bahlakulele imikhiqizo eyenzelwe ukuxazulula noma yiziphi izinkinga ngezipikili, kanye nesistimu yokunakekela okukhethekile ngokusetshenziswa kwazo. Ngomuntu oyinhloko yokusebenzisa umuthi waseYurophu ohlelweni lweMawala, ngahamba.
Ukuzikhandla nokunakekelwa kwezipikili ezinesibindi neMawala kwaqala ngokuxilongwa kwesimo sezipikili nesikhumba esazungezile. Njengoba kulindelwe, izikhwebu zami eziyigugu zanikezwa ama-epithets "abuthakathaka, abuthakathaka, abafuna ukwelashwa." Isimo siphenduka. Kancane kancane, i-cuticle izothengiselwa uhlobo olusha lokunakekelwa futhi luzokhula kancane futhi lube mncane, futhi i-matrix (indawo yokwakhiwa kwesipikili) izokwazi ukuthola izingxenye zomsoco wemikhiqizo yezokwelapha ngaphandle kokuvimbela.
Njengoba ufunde izigaba eziyinhloko zokunakekelwa nokunakekelwa kwezipikili ezinzima ezivela eMawala, ungaba i-virtuoso yokugcoba okungekho emzimbeni ekhaya futhi ugcine ukubukeka kahle kwezandla nezinzipho ngaphandle kosizo lochwepheshe. Ngaphezu kwalokho, le nqubo iphephile futhi ayinayo ingozi, kodwa nokho - iyamnandi kakhulu. Uma bengivame ukungathandi ukuxhumana nezesekeli zomuthi, manje ngiyakwenza ngenjabulo.
Ngosizo lwefayela le- nails , sibanika isimo nesimo esifanele. Ukuhamba kufanele kube lula, ngokuya ekugcineni kwe-nail kuya esikhungweni saso. Ungayifaki ipuleti ye-nail ekugcineni-yenza kube buthakathaka. Khona-ke sisebenzisa ukhilimu ukunciphisa i-cuticle Cuticle Cream, ukugubungele ngokunyakaza kokumisa ukukhanya, shiya umzuzu bese ufaka izandla zakho emanzini afudumele imizuzu emihlanu kuya kweziyisikhombisa. Hlanganisa kuqala ebhodini ithebhulethi ekhethekile ye-manicure: ijika amanzi ajwayelekile ibe yisisombululo sokuhlanza nesicathulo, esilungiselela izandla ngezinyathelo ezalandela zohlobo lwe-manicure.
Emgqeni wesipikili, sisebenzisa isisusa se-cuticle Cuticle Remover futhi sishiya okwesikhashana. Bese ubhala ngobumnene i-cuticle ehlanganiswe ngoboya bekotini ngenduku ye-orange, ukususa nokuhlanza izicubu ezifile, bese usebenzisa ipulasitiki (umqubu), unamathisele ukuma kwe-cuticle. Ithimba le-rabber lensimbi kufanele lihanjiswe kusengaphambili emanzini - lokhu kuyokwenza kube lula umsebenzi.
With remover i-polish remover, unciphisa ipuleti yama-nail futhi usebenzise ungqimba wokuqala we-Nail Shield i-nylon fibre ukuqiniswa kuyo.
Ngaphandle kwezandla, sibeka uMask Wokuhlanza Ngezandla ngomphumela wokuphuthumisa, wokugcoba nokuvuselela. Okulandelayo - ukugoqa ibhulashi nge-polythene bese uyishisa. Ngemuva kwemizuzu engu-10, hlambulula umkhiqizo ngamanzi afudumele bese uphatha isikhumba ngeSandla Cream ukhilimu.
Simboza izipikili nge-varnish (Mawala inikeza ama-shades angaphezulu kuka-100) futhi uyilungise nge-Colorfix ye-fixer. Ekuphetheni, ungasebenzisa ukhilimu onomsoco wezipikili ezilimele iNailactan. It ngcono ukujikeleza kwegazi ematrix futhi kukhuthaza ukukhula kwezipikili ezinempilo.
Amathiphu amahle okuhlanzeka kanye nempilo
Umlando kanye nentuthuko yezinhlaka
I-placenta ikhipha ku-cosmetology
Amafutha kakhukhunathi njengezithokozi zesikhumba
Konke Mayelana Nezimpaphe
Indlela yokuqinisa umphumela wezimonyo
Usuku Lomndeni, Uthando Nokuthembeka 2016 eRussia: umlando weholide eRussia namasiko. Siyakuhalalisela ngoMhla Womndeni 2016 evesini naseprose
Bhaka inkukhu enomnandi nephunga elimnandi
Izindlela zokulahlekelwa ngokweqile
Winter isanqante isaladi
Yimaphi abesifazane abakhetha amadoda?
Inhalation izingane ezikhwehlelayo
Isaladi yamaGreki nenkukhu
Umlando ngendlela entsha: ingaphakathi ngesitayela se-neo-retro
Okudingayo ukukwenza ukujabulisa indoda
Sivikela umzimba ngesikhathi sishintsha isimo sezulu
I-Freckles - isitayela se-makeup sekwindla-2016